~ ဏီလင်းညို ~: ညာ
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:06 PM
ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညာ.. နောက်တော့ ညာတာနဲ့ အားမရ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထပ် လိမ်.. နောက် လိမ်ဖန်များတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်သလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်လာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပွေလိမ်ရှုပ်ကြီးလိုလို ဘာလိုလိုခံစားလာ.. နေပူသည် ဗိုက်အစ်သည် ရာသီဥတုမကောင်း ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်တွေ ရပ်ပြီး ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို စောင်းရေးထားတာလားဗျ... :P:P:P:P
လောကကြီးမှာ နေရအခက်ဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညာတာဖြစ်မယ်နော်.။
တချို့တွေကတော့ ညာရင်းညာရင်းနဲ့ မှန်တယ်လို့ ထင်နေကြလားမသိ..
ကျွန်တော်လည်း မရယ်မိပါ။ သို့သော် ပြုံးမိတယ် ဘာကို ပြုံးတာလဲ ဆိုတော့
ဒီစာလေး ကိုးကြောင်း (ပြည့်တောင် မပြည့်ပါဘူး)ကို ဖတ်ပြီး တွေးတတ်ရေးတတ်တဲ့ လူကို သဘောကျ အားကျ လို့ ပြုံးမိ၏
ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ညာတယ်တဲ့လားဗျာ ....
တခါတလေ ငွေ့ရည်လေးတွေ ဖြစ်တည်ဖို့ အတွက်ဆို ရွာချပေးရတော့မှာပေါ့ ....
ဏီလင်းရေ တစ်ခါတလေ တော့လည်း မရည်ရွယ် ပဲ
ဟာသလေးက မိုက်တယ် ကိုဏီးရေ..။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်ကိုကိုယ် ညာမိတယ်။
နည်းနည်းနေကောင်းတာနဲ့ စာတွေ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် ထွက်နေပါလား
ဟာသလေးကနေ စာတစ်ပုဒ်ရအောင် ဆွဲထုတ်သွားနိုင်တယ်။ တော်ချက်အေ
မူးနေသေးတယ်ဆိုရင် စာဖတ်တာလျှော့ဦး မိညိုရေ။
အဲ .. သီတင်းကျွတ်တော့မယ်နော်
ဒီအတိုင်းဘဲလား.. ဘယ်တော့ စားရမတုန်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာနဲ့နော်။ :)
သူငယ်ချင်း ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေကို အကုန်လုံးတော့ မဖတ်ဖူးဘူး။
ဖတ်ပြီးသလောက်နဲ့ တွက်ရရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညာတဲ့ စာ မရှိဘူး ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်ညာတာ သူများ မသိဘူးဆိုတာ တခြားနေရာမှာပဲ ရမယ်။ စာပေမှာတော့ မရဘူး။ ညာထားလား ဖြီးထားလား လိုရာဆွဲထားလား ဆိုတာ စာဖတ်သက်ရင့်တဲ့သူက သိကို သိတာပဲ။ သနားပြုံး ပြုံးသွားတာ အဲဒီ စာရေးသူမှ မသိဘဲ။ သိလည်းသိမယ် ရှက်လည်းရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် သေလို့ ရတယ်။
ဘလော့ဂ်ပေါ် ရပ်တည်ချိန်မှာ ငါတို့ ပိုပြီး ရိုးသားကြစို့ သူငယ်ချင်း
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ပုံနှိပ်စာရေးဆရာတွေအတွက် ၀မ်းရေးခက်လို့ ထင်ပါတယ် ကိုဏီလင်းညို။ ကိုယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်၊ လုပ်နိုင်နိုင်မနိုင်နိုင် ပိုက်ဆံရပြီးရော ရေးနေကြရတာ နည်းတာမှမဟုတ်တာ။ ဒါနဲ့ စာအုပ်စင်က စာအုပ်စာရင်းမှာ ဘာလို့ မစန္ဒာမပါတာလဲ။ :(
ကိုယ်တိုင် မကျင့်သုံးပေမယ့် ကိုယ့်စာကို ဖတ်ပြီး သူတစ်ပါးမှာ အကျိုးကျေးဇူး တစ်စုံတရာ ရသွားနိုင်တယ် ဆိုရင်လည်း ကောင်းတာပါပဲ..
လူငယ်တွေတိုးတက်စေဖို့ သူကိုယ်တိုင် ရေးနေ ဟောနေ၊
ဒါပေမယ့်လည်း စာဖတ်သူအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာလေးရှိနေရင်
စာဖတ်သူအတွက်ဆိုတဲ့ စေတနာလေး massage အခြေခံလေးကို
ဆောရီး Message နဲ့ massage မွှားရိုက်လိုက်ပြီ။
ညီငယ် ဘရာဗို said...
မညာမိအောင်တော့ ရေးနေတာပဲ အစ်ကိုရေ..
ကိုဏီ ကြီးကြမ်းမာရှည်ပါစေ (ကြီး= ကြီးပွားပါစေ၊ ကျန်းမာ= ကျန်းမာပါစေ၊ ရှည်= အသက်ရှည်ပါစေ)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မှန်လို ရှုမြင်ပြီး ရေးတဲ့ အထဲမှာတော့ ညည်းက အပိုဒ်ရေ အများဆုံး ရေးနိုင်ပါပေတယ်အေ။ အခုလိုပေါ့။
ဒီပို့စ်လေးကို ဆက်ပြီးတော့ “ ညာ နောက်ဆက်တွဲ ” ဆိုပြီး ကျူပ်ရေးခွင့် ရမလားအေ။ ရေးခွင့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ရေးချင်မိတယ်။ “ ကိုယ့်အကြိုက် ” လိုမျိုးပေါ့။ လက်ခံတယ် ဆိုရင် စာလေး ပြန်ပါလားအေး :)))))))
ကိုဏီးရေ....ဟုတ်တယ်နော် တစ်ချို့အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ ခံယူချက်တွေက သူများတွေကို ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလား၊ ဟိုလိုလုပ်လိုက်ပါလား စသည်ဖြင့် နည်းပေးလမ်းပြဖို့လွယ်သလောက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကျတော့ တယ်ခက်လှတာကလား။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညာမိတာကို ညာမိမှန်းသိရင်တော့ အသိနဲ့ပြုပြင်နိုင်သေးတယ်။ ညာတာကိုညာနေမှန်းမသိဘဲ အရှိန်နဲ့ဆက်လိမ့်နေတာမျိုးက အဆိုးဆုံးလို့ထင်မိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော၊ သူများအပေါ်မှာရော ရိုးသားကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ.....။
ဒါနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရာနှုန်းပြည့်ကောင်းသွားသည်အထိတော့ ဂရုစိုက်လိုက်ပါဦး အစ်ကိုကြီးရာ.....ကြာနေပြီလေ...
ဟုတ်တယ်ကိုလင်းညို...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ညာလို့မရဘူးလေ..ကိုယ်ဘာလုပ်မိသလဲဆိုတာ ကိုယ်သာအသိဆုံးပေါ့...ကိုယ်ညာမိရင်လဲ ခံရမှာက ကိုယ်အရင်ဆုံးပဲဖြစ်မှာပါ ..ဒါ လောကနိယာမတခုပဲလေ ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာဘဲရေးတတ်လို့ ဒီဘလောက အကြိုက်ဆုံးထဲ ထည့်ထားပါတယ်....
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ သောင်ငယ်ဂျီးရေ....
မြသန်းတင့်၊ မိုးမိုး(အင်းလျား)၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ဒဂုန်ရွှေမျှား၊ ပခုက္ကူဦးအုံးဖေ၊ ကိုရီးယားစကားပြော၊ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)၊ မင်းလူ၊ နီကိုရဲ၊ မင်းခိုက်စိုးစံ၊ တာရာမင်းဝေ၊ အိမ့်ချမ်းမြေ့......
ကျေးဇူးလည်းတင်.. ဂုဏ်လည်းယူ.. ကြောလဲချမ်း..
မယှဉ်ကောင်း မနှိုင်းကောင်း.. ဘာကိုလည်းတော့ မသိ လန့်မိတာတော့ အမှန်ပဲး)))
အဲဒီဟာသထဲက စာရေးဆရာဟာ.. သူ့သားတွေကို ဆုံးမလို့ မရလို့၊ သူ့သားတွေလို အခြားကလေးတွေ ထောင်ထဲမှာ လမ်းမဆုံးစေချင်လို့...
သူ့လို သားဆိုးမိဘတွေရဲ့ဘ၀မျိုး အခြားမိဘတွေ မခံစားစေချင်လို့..
ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကို နှလုံးသားနဲ့ ခံစားရေးထုတ်နေတာများလား.... လို့လည်း တွေးမိလိုက်ပါတယ်။။
p.s. ကိုဏီဆိုလိုချင်တာကို မလေး သိပါတယ်..
ဒါပေမယ့် prism ရဲ့ ဟိုတစ်ဘက်ခြမ်းကနေပြီး... မြင်ကြည့်သွားတာပါ။
(၂ခု ထပ်သွားလို့ ၁ခု ဖြုတ်လိုက်သည်)
simple views said...
အိမ်ချမ်းမြေ.၇ဲ့ အမြင်က သင့်တော် မှန်ကန်ပါတယ်... သူများသားသမီးတွေကို သူ.သားတွေလို မဖြစ်စေချင်လို.ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းအရ ရေးနေရသူတွေ လဲ ရှိမှာပါ......
မလွဲ မသွေ တွေ.နေရတာကတော့ မြန်မာအလင်း ကြေးမုံတွေ ထဲက ဆောင်းပါးတချို.လို မဟုတ်တရုတ်တွေ ပြောင်းပြန်တွေ လံကြုတ်တွေ ပါပဲ...
မတူညီသော အတွေး အမြင်နဲ. ခံစားတတ်ကြတဲ့အတွက် ကျမလဲ အမှတ်တမဲ့ ရောက်ရင်း မတူသော အမြင်နဲ. ခံစားသွားပါတယ်...
ဆရာ..တစ်ကယ်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ညာလို့ မရဘူးနော်။